Kolonyada gudoomiyaha Hiiraan oo la weeraray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kolonyada gudoomiyaha Hiiraan oo la weeraray
17th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa maanta kormeer ku tegay deegaanno dhaca galbeedka gobolka oo laga saaray Al-Shabaab.
Cabdifataax Xasan Afrax iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa booqday deegaannada Buq-matoor iyo Baar.
Wafdiga ayaa u kuurgalay xaaladda nolosha deegaannada uu booqday. Deegaannada Buq-matoor iyo Baar ayaa ka mid ah deegaanno laga saaray kooxda Al-Shabaab. Kooxda ayaa ka talinaysay deegaannada muddo gaaraysa lix sano.
Guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in abaar iyo xaalad bini’aadannimo oo adag ay ka jirto deegaannada laga saaray Al-Shabaab, wuxuuna u jeediyay hay’adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya in gargaar deg-deg ah la gaarsiiyo dadka ku nool deegaannada.
Dhanka kale, wararka ka imaanaya Hiiraan ayaa sheegaya in Kolonyada gaadiid ah oo uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan C/fitaax Xasan Afrax lagu weeraray meel galbeed ka xigta Baledweyne.
Weerarka ayaa waxaa uu ka dhacay Deegaanka Buq-goosaar oo 60-KM u jirta Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan dhanka Galbeedka.
Waxaana Wararku ay sheegayaan in Ciidamo ka tirsan Al-shabaab ay Jidka u galeen Kolonyo gaadiid ah oo iskugu jira Ciidamada Itoobiya ee Qeybta ka ah Howlgalka AMISOM iyo kuwa Dowladda oo xiligaa galbinayay Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan.
Weerarka ayaa la sheegayaa in uu geeystay dhaawaca ilaa labo ruux, iyadoona C/fitaax Xasan Afrax uu ka badbaaday weerarkaas.